Blog မှာ Mouse Pointer နောက်က စာသားလိုက်တာ... — MYSTERY ZILLION
Blog မှာ Mouse Pointer နောက်က စာသားလိုက်တာ...
Blog မှာ Mouse Pointer နောက်က စာသားလိုက်တဲ့ဥစ္စာဗျာ.. ကုတ်ကရပြီ ဒါပေမယ့် ဘယ်နားမှာထည့်ရလဲမသိလို့ ကျွန်တော်လျှောက်ထည့်ကြည့်တာလည်း အဆင်မပြေဘူးဗျာ..
အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကျွန်တော့ကို သင်ပေးကြပါအုံး... အားကိုးပါတယ်
ကျွန်တော်လည်း အဲလို မျိုး ကုဒ်လေးတွေလိုချင်တယ်။ဘယ်မှာ ရှာ ရမလဲဟင်။ ကျွန်တော်လည်း ဘလော.တခု လုပ်နေလို.ပါ။
var text='[COLOR=#FFFF00][B][/B][/COLOR]WELLCOME TO WAYYAN112';
var delay=[COLOR=#FF0000]40[/COLOR]; // [COLOR=#FF0000]SPEED OF TRAIL[/COLOR]
var Xoff=[COLOR=#FF0000]0[/COLOR]; // [COLOR=#FF0000]PIXEL COUNT FROM THE LEFT OF THE CURSOR[/COLOR] (- VALUES GO TO LEFT)
var Yoff=-[COLOR=#FF0000]30[/COLOR]; // [COLOR=#FF0000]PIXEL COUNT FROM THE TOP OF THE CURSOR[/COLOR] (- VALUES GO UP)
var txtw=[COLOR=#FF0000]14[/COLOR]; // [COLOR=#FF0000]AMOUNT OF PIXEL SPACE EACH CHARACTER OCCUPIES[/COLOR]
var beghtml='<font color="[COLOR=#FF0000]#00436e[/COLOR]"><b>'; // OPTIONAL HTML CODE THAT EFFECTS WHOLE TEXT STRING SUCH AS[COLOR=#FF0000] FONT COLOR[/COLOR], SIZE, ETC.
//********** [COLOR=#33FF33]NO NEED TO EDIT BELOW HERE[/COLOR] **********\_\_
မှတ်ချက်- သူများဆီက ကူးထားတာ
sharpboy wrote: »
ကုဒ်က ရလို့ ထည့်တာ က ဟုတ်ပါပြီ.. ဘလော့လုပ်တယ် ဆိုတာက.. ဘယ်မှာ လုပ်ထားတာလဲ..ဆိုတာ တော့ ပြော သင့်တာပေါ့နော်... ဒါမှ အတိအကျ ဘယ်နားမ၊ှာ ထည့်ပါ လို့ ပြောလို့ ရမှာလေ.. (ဥပမာ. Worldpress တို့.. myanmarblggers တို့လိုပေါ့နော်..)... အဲဒီလို အတိ အကျ ပြောလို့ရင် လည်း.. .ဘယ်နားမှာ ထည့်ရမယ် ဆိုတာကိုတော့.. ကျွန်တော်က သိမှာ ဟုတ်ဘူးနော်..:P.......သိတဲ့သူတွေ ပြောပါလိမ့်မယ်.....ကျွန်တော် သိတာ ဆိုရင်..တော့.. ပြော ပြ မှာ..ပေ့ါနော်.....:D:D
အဲဒီကုဒ် ကလေး တွေ ကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း ယူထားလိုက်ပြီဗျာ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
အဲ..တခါတည်း ပြန်မေးလိုက်အုံးမယ်.. ကျွန်တော်ဘလော့က mmgenius.com နဲ့ လုပ်ထားတာ.. အဲဒီကုဒ် ကို..ဘယ်နား မှာ..ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ..နော်.. သိရင်ပြောပေး ကြအုံးနော်........ကိုကိုတို့...မမတို့............:6::6:
တခြားသူတွေ Code တွေကူးထားရင် WELLCOME TO WAYYAN112 ဆိုတာကို ပြောင်းထည့်ရမှာနော် (အဲဒါက ဝေယံ112) အတွက် အဲဒီနေရာမှာ Mouse Pointer နောက်က လိုက်စေချင်တဲ့ စာသား အစားထိုးရမှာ။ အနီရောင် နဲ့ ရေးထားတာတွေကိုလဲ ပြောင်းရေးလို့ ရသည်ဟု သိရသည်။ ကျွန်တော်ရေးထားတာက Blogger.com မှာထည့်ဖို့ တခြားမှာဆိုရင်တော့ မသိပါ၊ သိသူများက ဖြေပေးပါ။ ဦးဦး.. ဒေါ်ဒေါ်.. ကိုကို.. မမတို့..:106:
ကျွန်တော်ဆိုဒ်ထဲမှာ မောက်ထဲမှာ စာတန်းလေးပြေးတာအောင်မြင်စွာ လုပ်လို.ရသွားပြီခင်ဗျာ။
အဲဒီအတွက် ကုဒ်တွေ သူများဆီက ကူးလာပေးတဲ.အကို ကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။:d:d
http://www.dseffects.com/scriptsfx/DS_CursorTrailerText/DS_CursorTrailerTextCG.html မှာပါ ကြိုက်သလိုပြောင်းလို့ရပါတယ်..
ကျွန်တော်လည်း အစ်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲထည့်တာပါ ဒါပေမယ့် မရဘူးဗျာ ဘာမှမထူးဘူး..
var text="Haveanice day!";
ကုတ်တော့မမှားလောက်ပါဘူးနော်... ကျွန်တော်က Blogger.com မှာလုပ်တာပါ
ဒီလို ပြောင်းပြီး ထည့်ကြည့်ပါလား..........
ကိုရေ ကျနော်လဲ အဲကုဒ်ထည့်ချင်တယ်ဗျ. ဘယ်နေရမှာထည့်ရမှာလဲ.. weebly.com ကို၀က်ဆိုက်လုပ်ကြည့်နေတာဗျာ